कहिलेकाहीं प्राण केही प्रकाश, अनन्त कार्य, फसाइएको षड्यन्त्र बिना आवश्यक संसार र नायक को मानसिक पीडा बचत गर्नुहोस्। Anime बस यो श्रृंखला बाहिर "राजकुमार गीत गाउने"। सरल कथा, सुन्दर Panache, राम्रो संगीत विचलित र साँझ पारित गर्न मद्दत गर्नेछ। थप केही छैन।
Saotome एकेडेमी मात्र सर्वश्रेष्ठ मूर्तिहरू र रचयिता प्रकाशित साँचो व्यवसायीक यहाँ काम र कक्षाहरू पहिलो-वर्ग उपकरण संग सुसज्जित छन्। सजिलो सिक्न, तर पाठ्यक्रम पूरा शो व्यापार को दुनिया मा एक आकर्षक सम्झौता र उज्ज्वल भविष्यको लागि प्रतीक्षा छ। त्यसैले, धेरै को एक प्रतिष्ठित विद्यालय सपना मा प्राप्त। तर, यो सजिलो छ: प्रवेश्य मा एक प्रतिभा हुनुपर्छ। Nanami Haruka यस सन्दर्भमा भाग्यशाली: केटी क्षमता छ, र त्यो Saotome एक विद्यार्थी भयो।
अब यो कठिन काम एक वर्ष यो मूल्य केही छ, अन्तिम ओडिशन प्रमाणित गर्न लागि प्रतीक्षा छ। आफ्नो मनपर्ने कलाकार Hayato लागि एउटा गीत लेख्न: र त्यसपछि, तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने, Nanami आफ्नो कदर सपना पूरा गर्न सक्छन्। केवल वर्ष प्रतिज्ञा तीव्र हुन: अरूलाई पनि, अकादमी छैन वरिपरि गडबड गर्छ आए। त्यसैले हामी Nanami प्रयास गर्नेछौं। उनको मूर्ति - र यो एक साझेदार ठूलो मान्छे, जसलाई एक हुन्छ विशेष गरी जब, हार्ड छ।
"राजकुमार गीत गाउने" - एक महिला दर्शक उद्देश्य यो एनिमे अन्त: पुर शैली। त्यसैले, मुख्य पात्र एक आश्चर्यजनक सौन्दर्य, उनको सहानुभूति घेरिएको छ। सबै वर्ण राम्रो त हेर्न रोचक, बाहिर रुपले उच्चारण गरियो। हुनत धेरै मजाक रूपमा उल्लेख गरिएको छ जो हेरोइन, को व्यवहार रुचि छैन "लग-चान।"
जो वरिपरि सारा कहानी घूमती केटी। म मा अकादमी भ्रमण को पहिलो दिन समस्या मा प्राप्त गर्न व्यवस्थित। तर Nanami भाग्यशाली: यो दुई आकर्षक मान्छे उद्धार र केटी अझै पनि Saotome प्रविष्ट गर्न अनुमति दिएको छ।
, राम्रो कम र पातलो अम्बर हरियो आँखा र quads अन्तर्गत काटियो रातो कपाल एक 15 वर्ष ocharovashka को (वृद्धि 47 सेमी 160 किलो वजन)। एकदम लजालु र भद्र, तर आशावाद र उत्साह पूर्ण।
किनभने स्वास्थ्य समस्या को आमाबाबुले हजुरआमा गर्न गाउँमा देखि सानो Nanami पठाए। त्यहाँ उनले संगीत प्रेम गरे र पियानो बजाउन सिकेका, तर सांगीतिक संकेतन महारत छैन। शहर आफ्नो फिर्ती मा त्यो भ्रमित थियो र मानिसहरूको ठूलो संख्या बीचमा रहेको, panicked। र त्यो क्षण मा त्यो एक आतंक आक्रमण रोक्न जो, Hayato स्क्रिन मा एक प्रदर्शन देखे। यसरी सपना उहाँलाई लागि एउटा गीत लेख्न छ जन्म भएको थियो। यो आफ्नो प्रतिभा "एक" समूह हान्न, Haruka Nanami कला र धन्यवाद को एकेडेमी भर्ना गर्ने निर्णय गरे।
Saotome एकेडेमी छात्र, मूल कक्षा "सी" मा अध्ययन भएको थियो, तर पछि "एक" वर्ग हस्तान्तरण गरिएको थियो। सहभागीको एक समूह STARISH।
उहाँले एक लोकप्रिय Hayato छ। तर उहाँले आफ्नो पहिचान र प्रसिद्ध आइडल सबै जुम्ल्याहा भाइ पेश खुलासा गर्न चाहनुहुन्छ छैन। पछि यो मित्र खोल्न हुनेछ।
Tokiya - गाढा नीलो कपाल 17 वर्षीया अग्लो र नीलो-आँखाहरू मान्छे। को हँसिलो Hayato गर्न विपरीत सधैं सुरक्षित र चिसो। के कारणले शिक्षक उहाँले एक प्राण बिना गाइरहेका छ कि मान्छे पनि बताए। मित्रहरुलाई धन्यवाद खोल्न र साँचो आत्म देखाउन सक्षम थियो।
छात्र "एक" वर्ग र STARISH को सदस्य। यो Saotome अनुमति थियो जब Nanami मदत गरे। उहाँले Hayato एक कोठा मा जीवित छ।
रंग जस्तै रातो कपाल र आँखा छ Otoya। जवान मानिसहरू पोशाक को आकस्मिक शैली रुचाउँछु।
Otoya धेरै ऊर्जावान र राम्रो-mannered, उहाँले अनुकूल सबैको साथ, कुनै कुरा गर्ने यो छ। राम्रो, विश्वसनीय, यो उज्यालो अक्षर छन्। केहि भन्दा बढी, संगीत प्रेम गर्नुहुन्छ।
Ittoki भावना बुझ्न र यसको विकास पालना तथापि, सबै अन्य वर्ण रूपमा बनाउँछ। "गीत गाउने राजकुमार" मात्र एक वास्तविक नायक, तर पनि आफ्नो पृष्ठभूमि, अक्सर दुःखद देखाउँछ। उहाँले2वर्षको हुँदा, आफ्नो आमा, एक विमान दुर्घटना मा मृत्यु Otoya Ittoki एक अनाथालय हुर्केका त र थाहा छैन कि आफ्नो पिता - एक शानदार Saotome।
वर्ग "एक" मा अध्ययन र STARISH समूह छ।
Masato Hidzirikava - एक सफासँग छोट्याउन बाल, गाढा नीलो र नीलो आँखा एक अग्लो जवान। सधैं, शान्त रोकी र चिसो देखिन्छ, तर एउटा सिद्ध आँधी मा चर्किरहेको छ।
को जेठो छोरा र हकदार कम्पनी हुँदा Hidzirikava अप खुलारूपमा मा, आफ्नो भावना देखाउन प्रयोग त ल्याए। म त्यो Nanami सडक मा गाइरहेका देखे पछि एकेडेमी भर्ना गर्ने निर्णय गरे। उहाँले पियानो खेलन थाह छ।
को एनिमे मा, "राजकुमार गीत गाउने" र त्यहाँ Nanami संग नै वर्ग मा अध्ययन र पनि समूह STARISH सदस्य छ जो एक अनौठो चरित्र छ।
अग्लो। खैरो कपाल र हरियो आँखाले, उहाँले चश्मा पहनता। उहाँले तिनीहरूलाई हटाउँदछ भने, त्यहाँ Satsuki हुनेछ - एक उच्चारण सांगीतिक प्रतिभा आफ्नो Alter अहम्, तर एक भयानक अक्षर। यो दुई सिंड्रोम समस्या धेरै गरिब कुरा दिन्छ: त्यो Satsuki हुँदा उहाँले गरिरहेको थियो के बारे केहि सम्झना छैन।
हुनत Natsuki पाप, खाना पकाउनु प्रेम निरपेक्ष शून्य मान्छे रोक्दैन यो मामला मा, प्रक्रिया रमाइलो गर्न। त्यो उहाँले Nanami प्राण लागि थियो यस कारण लागि, प्यारा र सानो सानो कुरा प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले परी केटी भनिएको र त्यो आफ्नो कुकुर, एलिजाबेथ उहाँलाई सम्झना दिलाउँछ भन्छन्।
त्यो "सी" -class मा अध्ययन र समूह STARISH, साथै सबै प्रमुख पुरुष वर्ण मा छ। "गीत गाउने राजकुमार" - सुन्दर वर्ण को connoisseurs का लागि एक वास्तविक आनन्द र Ren - स्पष्ट पुष्टि।
लामो कपाल अग्लो मान्छे, सुनको-रातो रंग मा चित्रित। एक प्रभावशाली परिवार Dzingudzi, जो यसमा जिम्मेवारी एक निश्चित वजन imposes तेस्रो छोरा। सिक्ने कुनै पनि चासो महसुस गरेनन् सुरुमा त एकेडेमी, पुरानो भाइ मा बनाइएको थियो।
स्त्री समाजलाई Rena थप आकर्षित, यो महिलाहरु 'मानिस र अझै निरन्तर आफ्नो हरेक शब्द भेट्टाउने भनेर सुंदरियों घेरिएको छ।
संगीत र गायन लागि मद्दत Nanami Ren स्वाद को लागि धन्यवाद। उहाँले केटी थप ध्यान गर्न थाले र माया "बाख्रा" र "मेरो महिला" उनको कल गर्न रंग मा केटी ड्राइव गर्नेछन् थाले।
वैकल्पिक Ren गम्भीर बन्न सक्छ, तर अधिकांश समय goof रुचि।
अर्को विद्यार्थी "सी" वर्ग र मूर्ति समूह STARISH सदस्य।
को मान्छे को बाँकी गर्न यसको विपरीत, थानेदार उच्च वृद्धि को घमण्ड गर्न सकिँदैन, त्यसैले नेत्रहीन यो taller र slimmer बनाउँछ कि लुगा लगाउने प्रयास गर्नुहोस्। गोरा, को किसिमहरु को भाग गुलाबी मा रंग छ। अक्सर, चित्रित कालो नङहरु संग जान्छ आफ्नो कान मा भेदी छ। यो एक बांका र धेरै राम्रो मान्छे रूपमा ज्ञात छ, तर व्यक्तिमा यसको बारेमा भन्नुभयो भइरहेको घृणा गर्छ।
म एक बच्चा थियो जब, म गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएको थियो। उहाँले पनि थानेदार लामो बाँच्न थिएन भन्नुभयो। तर, केटा रोग लडे र आफ्नो मूर्ति Ryuya Hyuga जस्तै कराटे मा लगे मन र शरीर बलियो बनाउन।
हाइट्स को डर। किनभने त्यो उसलाई phobia हटाउन मदत र cheered भन्ने तथ्यलाई को Nanami साथीहरूसँग।
कुनै कम रोचक माध्यमिक वर्ण हो। वर्ग शिक्षक वर्ग "एक" - "गीत गाउने राजकुमार" को छ जो केवल रिङ्गो Tsukim, को मनोरंजक व्यक्तित्व गर्न दर्शक परिचय!
Dzheyms Makevoy: Filmography। जेम्स McAvoy संग सिनेमा
Sergey Gorobchenko: Filmography र जीवनी। सर्गेई Gorobchenko को सहभागिता संग सबै भन्दा राम्रो फिलिमहरु को सूची
"गृहकार्यले": अभिनेता र चलचित्र सुविधाहरू
पागलपन संग पागलपन र बिरामीको बारेमा सबै भन्दा राम्रो चलचित्र। पागलपन संग मान्छे बारेमा सबैभन्दा हडताली र प्रभावशाली फिलिमहरु को सूची
यो घर धनी - यो हुनुहुन्छ? जंगली घर धनी हुनुहुन्छ?
व्यवसाय stringer। एक stringer - यो कसले हो?
Ghali Abaydulov: भूमिका, चलचित्र, जीवनी
Denpasar (विमानस्थल) - बाली को हावा गेट
प्रकृति Bazarova सम्बन्ध। "पिता र छोराहरू": विशेषताहरु Bazarov
उच्च विद्यालय5(खबरोभ्स्क): वर्णन, प्रशिक्षण को सुविधाहरू, समीक्षा
Slab जग: को फाइदा र बेफाइदा। आफ्नै हातले slab जग